Iran oo lagu eedeyay isku day weerar oo ka dhan ah markab Ingriisku leeyahay |
Iran oo lagu eedeyay isku day weerar oo ka dhan ah markab Ingriisku leeyahay
Dowladda Britain ayaa maanta sheegtay in doonyo ay leedahay Iran ay isku dayeen in ay is hortaag ku sameeyaan markab shidaal oo uu Ingiriisku leeyahay xilli uu marayay marin biyoodka Hormuz.
Bayaan kasoo baxay xukuumadda Britain ayaa lagu sheegay in dhacdadani ay ku lug leeyihiin saddex doon oo ay Iran leedahay. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in doonyahaasi ay dib u gurteen kaddib markii ay digniin ka heleen markab dagaal oo uu Ingiriisku leeyahay.
Ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa beeniyay eedda uga timid Ingiriiska. Wakaaladda wararka dalka Iran ee Fars, ayaa sheegtay in doomaha Iran ay marinka Hormuz ee u dhaxeeya Iran iyo Khaliijka ay ka sameeyaan roondo maalinle ah, isla markaana aysan jirin wax maraakiib ama doonyo ah oo ay isku dhaceen gaar ahaan maraakiibta Ingiriiska.
Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa Arbacadii uga digay Britain in ay wajahi doonto cawaaqib, kaddib marki ay Ingiriisku qabteen markab shidaal oo ay Iran leedahay kaasoo looga shakisanyahay inuu saliid u waday Suuriya.